News | DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION
ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
August 18, 2017 Xbiz
Download Here: Shipping Division (Information-Procedures)
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရယူရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) များ ခေါ်ယူခြင်း
Image August 11, 2017 Xbiz
June 19, 2017 Xbiz
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း (၂/၂၀၁၇)
June 2, 2017 Xbiz
EXAMINATION TIME TABLE FOR OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH
May 16, 2017 Xbiz
* Download Here! OOW BOE TIMETABLE
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့၏ ကြေငြာချက် (၈/၂၀၁၇)
* Download Here! OOW (BOE) NOTICE